Malezia: Ny Sakafo Sy Ny “Blog Action Day 2011” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2011 5:26 GMT
Ho an'ny Blog Action Day tamin'ity taona ity, izany ny ‘sakafo’ no lohahevitra, maro ireo Maleziana nandray anjara tamin'ilay hetsika, ary nanoratra mikasika ny lohahevitra tena samihafa tany anaty bilaogin-dry zareo tany
Ilay bilaogera ao amin'ny Boy Meets World dia nanoratra ny mikasika ny hoe soa ihany izy fa tsy nisedra tsy fahazoana mihinan-kanina, ary ny hoe zavatra betsaka no noraisiny ho toy ny efa azy sahady maimaimpoana
Tena velom-pisaorana mihitsy aho fa afaka miaina anaty firenena iray izay tsy misy olana momba ny fameperana ara-tsakafo izany. Ny marina dia manana ireny toeram-pivarotana goavambe ireny isika, ahtàna karazan-tsakafo maro isan-karazany isaky ny talantalana, saika isaky ny lalantsara mba ho azontsika isafidianana. Ny olona sasany etsy andaniny, toy ireo miaina any amin'ny Tandrok'i Afrika, dia miezaka isan'andro mivavaka mba hahita zavatra azo hanina ary eto aho dia mahatsiaro ny nahandron'i Neny rehefa izy ilay manao glasy hatao tsindrin-tsakafo iny. Amin'izao fotoana dia tsy mila ezaka be manao ahoana akory isika mikarakara nahandro noho ny fisian'ireo toerana fisakafoanana sy faritra natao hihinana tsy lavitra akory ny tokonantsika.
Shuwen, koa, dia nahita fahitàna rehefa nahazo tso-drano ho afaka miaina anaty fahafahana misakafo, taorian'ny nahatsapany fa marobe ireo olona, indrindra fa ny ankizy, no miady mafy mba hahita hanin-kohanina.
Raha ianao mbola sondriana manontany sosokevitra amin'ny namanao momba izay toerana hisakafoana ny antoandro, ireny ankizy ireny tsy mahalala akory na dia ny dikan'ny hoe sakafo antoandro aza.
Tsy iasan'izy ireny saina izay tsiron-tsakafo any, ny hany zavatra iriany dia ny sakafo satria tsy toy ny ankamaroan'ireo olona mamaky ity lahatsoratra ity, izy ireny dia mihinana mba ho velona
Tsy ela akory izay, nisaina ny zavatra izay tena mahamenatra ahy tokoa aho. Hoy aho tamin'ny tenako ihany
“Ka ahoana raha mandanilany foa ny sakafo aho ? Tsy sahala amin'ireo ankizy mahantra izay tokony hahazo ny sakafo nataoko tsinontsinona” Saingy amin'ny fo tsotra, tsaroako daholo izany ankehitriny
Kolo Mee avy any Kuching . Sary avy amin'ny Facebook-n'i Daniel Tay
Anesh Shapiah, etsy ankilany, dia niresaka momba ny sakafo tena ankafiziny. Cutebun, koa, nanoratra momba ny sakafo tena tiany, ahandro Sarawakian iray.
Ny sakafo tena ankafiziko dia ny Kolo Mee! Kolo Mee avy any Kuching, Somay hafakely ny Sarawak raha any amin'ny toerana hafa indrindra indrindra fa ny karazana paty ampiasaina! Ny iantsoany an'io karazana paty io dia ‘kiew mee’ midika hoe paty miolana.
Nahoana? hoy ianao mety hanontany. Nanomboka teo amin'ny faha_3 taonako aho no nihinana Kolo mee fony nifindra ho any Kuching rehefa niala an'i Sabah ny fianakaviako. =) Tsapanao amin'izay ve hoe hatraiza ny halalin'ny fitiavako ny Kolo Mee ? <3
Felicia dia manolotra sosokevitra ho ana trano fisakafoanana iray:
Ilay indray andro iny, ny 13 Oktobra, izahay sy bf dia nandeha hamerina ny tapakilanay everyday.com! 😀 Tena adinoko tanteraka ny naka sary anay teo ampamerenana ilay tapakila, noho izany dia nanapa-kevitra aho ny hanao an'ity ho solony. Antenaiko fa hety io xD
Eny, ity ilay tapakila. RM9.90 ho anà sakafo 5 lovia!
Kim nanoratra mikasika ny toeram-pisakafoana tena ankafiziny, toeram-pisakafoanana iray karazan'irony Hello Kitty ireo.